Drafitry ny lesona: Sexting - Ny Foundation valisoa
Home Drafitra fampianarana maimaim-poana Drafitry ny lesona: Sexting
Drafitra lesona: Sexting
Ny mampiavaka ny lesona The Reward Foundation dia ny fifantohana amin'ny fiasan'ny ati-dohan'ny tanora. Izany dia manampy indrindra ny mpianatra hahatakatra sy hanangana faharetana amin'ireo mety ho voka-dratsy amin'ny fampiasana sary vetaveta sy sary vetaveta. Ny Reward Foundation dia neken'ny Royal College of General Practitioners any London hampianatra atrikasa matihanina amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
Ny lesona ampianarintsika dia mifanaraka amin'ny departemantan'ny Fanabeazam-pirenena farany (governemanta UK) "Fampianarana momba ny fifandraisana, fifandraisana ary fanabeazana ara-pananahana (RSE) ary fanabeazana ara-pahasalamana" fitarihana araka ny lalàna.
Sexting, ny lalàna ary ianao **
** Azo alaina ho an'ny mpianatra any Angletera sy Wales mifototra amin'ny lalàn'i Angletera sy Wales; azo alaina ihany koa ho an'ny mpianatra any Ekosy miorina amin'ny lalàna Skoto.
Lesona 1: Fampidirana ny sexting
Inona no atao hoe sary an-tsary na sary vetaveta novokarin'ny tanora? Ny mpianatra dia mieritreritra ny antony mety hangatahan'ny olona sy handefasana selfies mitanjaka. Mampitaha ny loza ateraky ny sexting amin'ny firaisana ara-nofo izy ireo. Ny lesona dia mijery ihany koa ny fiantraikan'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny sexting sy ny fanorisorenana ara-nofo.
Manolotra fampahalalana momba ny fomba hiarovan-tena amin'ny fanorisorenana tsy ilaina sy ny toerana hahitana loharanom-pahalalana mifantoka amin'ny tanora hianarana bebe kokoa.
Mianatra ny fomba hanesorana ireo sary mamoa fady amin'izy ireo amin'ny Internet ireo mpianatra.
Lesona 2: Sexting, sary vetaveta ary ny atidohan'ny adolantsento
Ity lesona ity dia mijery ny atidoha mahafinaritra sy plastika. Manazava ny antony ilazan'ny neurosologists hoe, "Amin'ny hetsika rehetra eto amin'ny Internet, ny pôrnôgrafia no mety hiteraka fiankinan-doha". Ahoana ny fiantraikany amin'ny sexting?
Mianatra ny mpianatra ny amin'ny fomba fanaovana hetsika Internet toy ny pôrnôgrafia, media sosialy, filalaovana, filokana sns. Dia 'stimulus supernormal' izay mahatsiaro tena manaitra noho ny zavatra hafa rehetra.
Firy ve ny pôrnôgrafia? Inona avy ireo olana ara-pahasalamana ara-tsaina sy ara-batana? Inona no vokany eo amin'ny fanatrarana na ny fifandraisana?
Ny mpianatra dia mianatra momba ny fomba ahafahan'ny ati-doha mianatra mifehy tena, mifehy tena ary inona ny paikady manampy amin'izany. Hitan'izy ireo ny momba ny loharanom-pahalalana hanampiana azy ireo hahafantatra tsara sy hahafahany manao safidy tsara.
Lesona 3: Sexting, ny lalàna ary ianao
Tsy fe-potoana ara-dalàna ny sexting fa misy vokany tena ara-dalàna. Tsy ara-dalàna ny ankizy manamboatra, mandefa ary mahazo sarin-janaky ny ankizy tsy mendrika, eny fa na dia ekena aza. Heverin'ny polisy ho toy ny olana fiarovana izy io. Raha misy ny tatitra amin'ny polisy amin'ny polisy noho ny fandikan-dalàna amin'ny fandefasana hafatra an-tsokosoko, dia mety hisy fiatraikany amin'ny asa aman-draharaha any aoriana, eny na dia ny fanaovana asa an-tsitrapo aza, raha misy fiaraha-miasa amin'ny olona marefo.
Manome drafitra fampianarana roa eto izahay (ho an'ny vidin'ny iray), ny iray ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany ary ny iray ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa. Samy manana fandinihana tranga samy hafa izy ireo mba hanehoana ny fiovan'ny dingan'ny fahamatorana. Ny fanadihadiana dia mifototra amin'ny tranga ara-dalàna tena izy ary taratry ny toe-javatra mahazatra izay mety hahitan'ny mpianatra azy.
Ny Case Studies Pack ho an'ny mpampianatra dia manome valiny sy sosokevitra isan-karazany hanampiana ny mpianatra hisaintsaina sy hifanakalo hevitra momba ireo toe-javatra sarotra hita ao amin'ny Case Studies Pack for Pupils. Avelan'izy ireo hiresaka momba ny raharaha amin'ny toerana azo antoka ny mpianatra ary hanampy amin'ny fananganana faharetana hampiasaina ivelan'ny efitrano fianarana.
Ny lalàna dia nodinihan'ny Sampan-draharahan'ny Fampanoavana Crown ho an'i Angletera sy Wales, ny Office Crown and Procurator Fiscal Service ary ny Scottish Children's Reporter Administration any Scotland, nataon'ny polisy sy mpisolovava.